प्रहरीमा बढ्यो आकर्षण: ५ हजार २ सय २७ पदका लागि, ९३ हजार एक सय ६९ आवेदन ! – AB Sansar
December 17, 2020 December 17, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on प्रहरीमा बढ्यो आकर्षण: ५ हजार २ सय २७ पदका लागि, ९३ हजार एक सय ६९ आवेदन !
काठमाडौं । सुरक्षा निकायको भर्नामा यो वर्ष उच्च आवेदन परेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको भर्नामा गत वर्ष भन्दा धेरै गुणा आवेदन परेको हो । नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवानको भर्नामा १७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । गत वर्ष ६ गुणा बढी मात्र आवेदन परेको थियो । यो वर्ष ५ हजार २ सय २७ पदमा आवेदन दिएकोमा ९३ हजार एक सय ६९ आवेदन परेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरले बताए । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
October 16, 2020 October 16, 2020 Ab-संसार
लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर ५‍.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो